Ghota nnukwu ihe bara uru - Ornamental osisi na-eto eto - 2019
Ejiri nnukwu stonecrop mee ihe, ihe bara uru na ihe ndị na-egbochi ya
Sill buru ibu bụ onye nnọchianya nke osisi herrenceous herbaceous, bụ nke ezinụlọ Tolstyankov. O nwere ọtụtụ ụdị na iche iche, ihe karịrị 500.
Ọ dị mkpa! Otu ụdị stonecrop bụ nsi - ọ bụ acrid.
Na mgbakwunye na ọdịdị mara mma, a na-eji stonecrop nnukwu eme ihe ọ bụghị nanị dị ka ngwá ọrụ a na-ewu ewu na nkà mmụta ọgwụ, ma na-enyekwa ihe ndabere nke ụfọdụ ọgwụ ọjọọ na omenala.
A pụrụ ịchọta ya na Europe nile, na Mediterranean, China, Siberia, na Japan. Ihe omumu di omimi di otua di iche iche di iche iche: ha nwere ike ibu oyi-siri ike ma obu ebe ogba ocha, evergreen or deciduous. Osimiri na-amalite na mbubreyo July ma na-agwụ n'October, a na-emepụta mkpụrụ osisi ahụ ma chaa chaa na mbubreyo September - mmalite October.
Ị ma? Obughi na o nweghi aha ya "Sedum maximum L". A kwenyere na ọ sitere na Latin "sedo" - "na-agbada", n'ihi na n'oge mbụ, a na-eji epupụta nke osisi a mee ihe dị ka ihe nchịkọta.
A na-agbanye mgbọrọgwụ, fusiform. Akwụkwọ ndị ahụ dị n'ogologo oval, agba ọchịchịrị na agba, kpuchie ya na mkpuchi waxy ma nwee uto uto. Ogwu na eto eto ruo 80-90 cm.
Njirimara ọgwụ nke osisi
Kedu ihe bara ezigbo uru na soda
Otu esi eji nnukwu stonecrop na nkà mmụta ọgwụ
Nchịkọta na ihicha nke ihe eji agwọ ọrịa
Nkume a na-agbanyeghị aka
Ihe omimi nke nkume stonecrop buru ibu
Sedum nwere organic acids nke di- na tricarboxylic usoro (a-ketoglutaric, citric, malic, wdg). Amino acids na-anọchite anya ya site na asidic na glutamic acid.
Carbohydrates na stonecrop dị n'ụdị mono-, di-, na polysaccharides, dịka fructose, glucose, sucrose, sedoheptulose, na ndị ọzọ, bụ nke polyctal polyctaronic pectin nwere ike ịmalite. Ọ na-agụnyekwa bekee nke ọdịdị phenolic, dịka:
flavonoid glycosides (n'etiti ha ihe kachasị elu nke quercetin, kaempferol, isorhamnetin na ọgwụ ndị myricetin);
kọfị na chlorogenic asịd;
Tụkwasị na nke ahụ, nnukwu skwọm nwere ihe ndị dị ndụ. N'etiti ha bụ ascorbic acid (dị na nnukwu quantities) na carotenoids.
Akuku uzo nwere: ash - 8.65%; Macronutrients (mg / g): potassium (K) -21.80, calcium (Ca) -24.40, magnesium (Mn) -17.10, ígwè (Fe) -0.20; Ihe ndị na-emepụta (CBN): magnesium (Mg) - 0.11, ọla kọpa (Cu) - 0.71, zinc (Zn) - 0.28, chromium (Cr) - 0.16, aluminum (Al) - 0.22, (2), - (2) - (2), na - - 0.14. boron (B) - 8.00 mcg / g.
A na-eji sedum na ọgwụ na-eme ihe mgbe niile dịka ihe na-akpali akpali nke mkpụrụ ndụ, ebe ọ bụ na ọ na-eme ka usoro nke metabolic dị na anụ ahụ ma na-eme ka nchịkwa dị elu, nakwa dị ka ihe mgbochi na ụbụrụ. A na-eji ya maka umengwụ, ọnyá ndị na-adịghị mma, na nnukwu ọbara na-egbu mgbe ọnyá ndị siri ike.
Sedum nwere nnukwu ihe ịga nke ọma na-agwọ ọrịa ọrịa oge, ma na-enyere ndị mmadụ aka ịta ahụhụ site na ụfụ na-adịghị ala ala. A na-ejikere na mgbọrọgwụ na ahịhịa nke osisi a iji na-agwọ ọrịa purulent na ọkụ, ọnyá, ma mee ka ngwọta ha mee ngwa ngwa. A na-ejikwa ọgwụ ndị yiri ya wepụ ihe ọnụ.
Ị ma? A na-eji ọgwụ "Biosed" eme ihe na-adabere na nnukwu stonecrop ma bụrụ ihe na-akpali akpali.
Tụkwasị na nke ahụ, na ịme ọgwụ na ị nwere ike ịhụ blanks, dị ka:
Infusion nke mgbọrọgwụ na epupụta;
Decoction nke epupụta;
Ihe ọṅụṅụ si epupụta;
Infusion nke epupụta.
Sill buru ibu nwere ihe bara uru bara uru:
ọnya na-agwọ ọrịa.
Kemgbe oge ọ chọpụtara, nnukwu okwu na-agbakwụnye mgbe niile na ọrịa ndị ọ na-agwọ, yana ntụziaka na iji ya. N'okwu ndi mmadu, usoro ndi kacha ewu ewu bu ojiji nkume nkume:
Mmiri mmiri: eji mee ihe na-akpata ọrịa, ọrịa iku ume, obi mgbawa, ọrịa nke eriri afo, akụrụ.
N'ihe na-eme achịcha: eji mee ihe na infertility ụmụ nwanyị, ụbụrụ na-egbu egbu nke eriri afo, adịghị ike mmekọahụ.
Ọhụrụ ihe ọṅụṅụ osisi: eji eme ihe na-egbu egbu nke akụkụ ahụ ụmụ nwanyị na-ahụ maka ụmụ nwanyị, yana epilepsy.
Fresh leaves nke osisi: tinye aka wepu ọka.
Poultices na ndabere nke steamed epupụta / ma ọ bụ shredded mgbọrọgwụ: belata ihe mgbu n'ọnọdụ ọrịa rheumatism, ahụ mgbu ahụ, ọrịa catarrhal.
Ọzọkwa, a na-eji stonecrop buru ibu n'ụdị dị iche iche dịka ụlọnga tonic, tonic na anti-inflammatory.
Ị ma? N'etiti ndi mmadu, nnukwu stonecrop enweta otutu otutu aha, nke ndi kachasi ama bu: ohia ahihia, ahihia na ahihia hernial.
Nkume Stonecrop na ndi mmadu ndi ogwu ka anaghi eji ya, ihe ogwugwu ya, jiri ya tụnyere akwukwo na mgbado, abughi ihe efu.
Maka ọtụtụ ntụziaka, a na-eji ahịhịa a na-ewe ihe ubi. A ghaghị egbute ya n'oge oge okooko osisi ahụ, ọ bụ n'oge a ka ntinye nke bekee na-arụsi ọrụ ike.
A ghaghị ikpokọta akwukwo nri na ihu igwe na-ekpo ọkụ, dịka maka ụtụtụ a, mgbe ọ na-ekpochapụ igirigi. Ị nwere ike belata na sickles, mma ma ọ bụ isi.
Anakọtara akwukwo ozo ohuru n'ime ebe di mma, nke akpo na ebe ozo. N'okwu a, n'ime ụbọchị atọ enwere ọganihu a na-ahụ anya na ọnụ ọgụgụ ndị na-arụsi ọrụ ike. A ghaghị ịdọrọ ihe ndị dị n'ime ebe ndị dị mma: na ikuku, na ọdụ, n'okpuru ebe a wụsịrị, ma ọ bụ n'ebe ndị ọzọ a na-eme nke ọma.
Ọ dị mkpa! Iji kpoo nkume buru ibu na-agbanye mgbọrọgwụ.
Ndụ ndụ nke ihe ndị a nwetara bụ afọ 2. Isi ísì ya adịghị ike, ọ dị iche.
Banyere mgbọrọgwụ, a ghaghị igwu ha tupu tupu September - October. Mgbe ha egwu ala, ha ga-ekpochapuchasịsị ala, bee n'ime mkpirikpi hà nhata ma gbanye na ikuku. Mgbọrọgwụ na-enwe uru bara uru karịa oge akwụkwọ ahụ, ndụ ndụ ha dị afọ 3.
enwekwu obi mgbawa;
enweghị mmanụ hydrochloric na ihe ọṅụṅụ gastric.
Ochotokv ndi mmadu ndi mmadu ji obi ike na-ewere ebe ya, ihe bara uru ya abughi obi abua.
Nri Vitamin: Ntụziaka maka Nri na Peking Cabbage na Avocado
Oghere a pụrụ ịdabere na ya maka griin ga-eme onwe gị site na ihe ndị dịnụ: ọnụ ala ma mma
Ihe bara uru, na ihe nwere ike imebi viburnum ọbara ọbara maka ahụ ike ụmụ nwanyị
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ejiri nnukwu stonecrop mee ihe, ihe bara uru na ihe ndị na-egbochi ya